Kenya waxay kordhisay bandowga, waxay mamnuucday dhammaan isu imaatinnada dadweynaha iyadoo COVID uu soo ifbaxayo
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Kenya » Kenya waxay kordhisay bandowga, waxay mamnuucday dhammaan isu imaatinnada dadweynaha iyadoo COVID uu soo ifbaxayo
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Kenya • News • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Wasiirka Caafimaadka Kenya Mutahi Kagwe
Tirada caabuqyada ayaa maalin walba kor u sii kacaysa iyadoo siyaasiyiinta, hal sano ka harsan tahay doorashada guud, ay abaabulayaan isu soo baxyo waaweyn oo dalka oo dhan ah.
Tirada kiisaska cusub ee COVID-19 ayaa ku soo kordhay Kenya.
Kenya waxay kordhisay bandowga habeenkii ee dalka oo dhan.
Isbitaalada dalka Kenya ayaa waxaa buux dhaafiyey kiisas cusub oo coronavirus ah.
Kenya Wasiirka Caafimaadka Mutahi Kagwe ayaa maanta ku dhawaaqay in waddanka Bariga Afrika uu kordhinayo bandowga habeenkii isla markaana uu mamnuucayo isu imaatinnada dadweynaha iyo shirarka qof ahaaneed si loo joojiyo faafitaanka cirka isku shareeraya ee COVID-19.
Kenya, maalmihii la soo dhaafay, waxay ku aragtay kororka kiisas cusub oo COVID-19 ah oo ka yimid kala duwanaanta Delta, iyadoo heerka wax-qabadku uu ahaa 14 boqolkiiba illaa Jimcihii marka loo eego qiyaastii toddoba boqolkiiba bishii hore.
“Dhammaan isu imaatinnada dadweynaha iyo shirarka shaqsiyeed nooc kasta ha ahaadee waa la joojiyay waddanka oo dhan. Marka tan la eego, dhammaan dowladda, oo ay ku jiraan shirarka dowladaha iyo shirarka, waa in hadda ka dib loo rogaa ama la beddelaa 30 -ka maalmood ee soo socda, ”ayuu Kagwe ku yiri khudbad telefishanka laga sii daayay Jimcihii, isagoo ka digay in isbitaallada dalku ay noqdaan kuwo aad u badan.
Wuxuu sheegay in heerka wax -ku -oolnimada uu halis ugu jiro inuu sii kordho haddii aan la qaadin tallaabooyin halis ah.
"Waxaan sii wadnaa inaan ka codsanno dhammaan dadka reer Kenya, oo ay ku jiraan kuwa qaatay tallaalladooda COVID-19, inaysan hoos u dhigin ilaaladooda," ayuu yiri Kagwe ka dib kulan ay yeesheen Guddiga Qaranka ee Gurmadka Degdegga ah ee Coronavirus.
Kenya wuxuu ku jiray nooc bandow ah tan iyo bishii Maarso ee sanadkii hore markii masiibada ay markii ugu horreysay ku dhufatay, Kagwe wuxuu sheegay in la gaarsiin doono waddanka oo dhan laga bilaabo 10 -ka fiidnimo ilaa 4 -ta subaxnimo waqtiga maxalliga ilaa ogeysiis dambe.
Sida qaar badan oo ka mid ah deriskeeda, Kenya waxay qaaday tallaabo deg deg ah oo ka dhan ah COVID-19 bilowgii masiibada, waxay xaddiday dhaqdhaqaaqa iyo xiritaanka xuduudaha iyo iskuulada.
Laakiin tirada cudurrada ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa iyadoo siyaasiyiinta, hal sano ka hadhsan tahay doorashada guud, ay abaabulayaan isu soo baxyo waaweyn oo dalka oo dhan ah.
Soo -daynta tallaallada ayaa si gaabis ah uga socotay Kenya, taas oo qayb ahaan sabab u ahayd la'aanta sahayda.
Kenya waxay tallaashay 1.7 milyan oo qof, kuwaas oo 647,393, ama 2.37 boqolkiiba dadka waaweyn, si buuxda loo tallaalay.
Wadar ahaan, Kenya waxay diiwaangelisay in ka badan 200,000 kiis oo COVID-19 ah iyo 3,910 dhimasho.
iyagoo ka digaya in isbitaallada ay noqdaan kuwo buux -dhaafsan.